Okuthunyelwe nokunye izinhlobo bashabalala kuyingxenye ebalulekile yesiko-Orthodox nenkolo. Nakuba zonke okukhulu zabo ithobela hhayi nelinye ikholwa, abaningi uzame njengoba amabutho abo. Isikhathi eside kunabo yokuHlawula lena ekulandulayo Easter, sithatha cishe amasonto ayisithupha. Phakathi nalesi sikhathi, uNkulunkulu othembekile bathambekele angadli imikhiqizo yezilwane, qinisekisa ukuthi nakwezinye izinto eziphathelene nako esemhlabeni, nangamaKristu ngomthandazo.
Iningi Orthodox, bezama ukulandela zonke emasikweni ukholo, abakwazi ukuqonda ukuthi kungenzeka endaweni uju okuthunyelwe yokudla. Ngakolunye uhlangothi, akusiyo phakathi ukudla okwakwenqatshelwe. Ngakolunye - kusenzima isilwane, ngoba okukhiqizwa izinyosi. Ngaphandle honey - abe noshukela onambitheka ngendlela, ngakho-ke ngokweqile ezithile.
Wonke umuntu uyazi ukuthi ngesikhathi sokuzila ukudla ungadli amakhekhe, khekhe kanye ushokoledi ngenxa khona ukubunjwa yabo ubisi, ibhotela, amaqanda kanye neminye imikhiqizo Skoromniy. Ngakolunye uhlangothi, ushukela kwamukelekile ngempela. Omama abaningi abasemakhaya ngisho ingashintshwa ngokwabo kuhhavini ophaya Lenten, cookies kanye amakhekhe. Phela, ukuphila ngaphandle amaswidi isikhathi eside kunzima kakhulu, ikakhulukazi ezinganeni. Iposi yezokwelapha lisetshenziswa e zezindela abaningi, ukuze abantu besonto abavamile kule ndaba zingabonisa Ungakhathazeki.
EbuKristwini, ngaso sonke isikhathi, uju kwakubhekwa njengento eyamukelekayo kuNkulunkulu. zezindela abaningi babe apiaries zabo, Orthodox, kukhona ngisho abangcwele - abashisekeli ukufuywa. Kumayelana Zosima futhi Savvatiy ngubani wasungula sezindela Solovetsky.
Ngisho nangezikhathi ekuhambisaneni Amasiko obuKristu eRussia kukholakala ukuthi kungenzeka ukuba okuthunyelwe uju. Ukuqinisekiswa leli qiniso eziningana. Okokuqala, kukhona namanje eziningi zokupheka for Meatless izitsha, lapho-ke liye langena. Lokhu iphalishi amnandi futhi izithelo Baked (ithini lamapheya, apula), kanye neziphuzo. Okwesibili, okunzima kakhulu Dormition Fast, iqala ngo-August 14 futhi kuthathe amasonto ama-2, ihlobene uju. Ngosuku lwakhe lokuqala, namanje ngokuthi Honey Spas, wanquma ukwahlukaniselwa amasonto kule ubumnandi, bese bawunakekele unyaka wonke, futhi udle ngamaholide noma ngesikhathi izifo.
Kubi eRussia, kwanqunywa ukuba anikele ngayo, kuhlanganise uju, ngoba kwakucatshangwa ukuthi yaba isipho esivela kuNkulunkulu kumelwe kwabelwane ngakho. Babaziwa Ngokungenisa ukuthobeka nokwethembeka kwakhe ukuzila Krestitel ioann kwaba linesizotha kakhulu ukudla. Azila khona ukudla unyaka wonke futhi akazange adle ukudla isilwane. Amaswidi ekudleni kwakhe kwaba nezinyosi zasendle nje. Iphinde ingenye yezizathu ukusetshenziswa kwaso amaKristu ngaphandle kwemingcele.
Ngokusho izazi zokudla
Izinzuzo ukudla eminyakeni yamuva, bathi, hhayi kuphela ezithembekile futhi abefundisi, kodwa futhi odokotela. Noma yimuphi umzimba udinga athula futhi yokuhlanza. Kodwa lokhu akusho ukuthi Ukudla ngesikhathi ezilile kufanele kube iphilile okuyisidina. Uma umzimba ongawamukeli zonke amavithamini ezidingekayo namaminerali isikhathi eside, kungalimaza. uju wemvelo iqukethe nabo inqwaba. Ngakho odokotela lapha ngombono wami nakanjani sithathwe ngokuhlanganyelwa. Futhi uma they buza uma ungaba in uju okuthunyelwe, bese gastroenterologists, futhi izazi zokudla, kanye nezinye izazi uzokutshela ukuthi ngisho kudingekile. Lokhu kuyiqiniso ikakhulu uma ngosuku olwandulela Easter, lapho imifino kanye imifino akwanele, futhi ngonyaka odlule cishe akukho amavithamini kwesokunxele. Uju kulokhu nje insindiso.
zokupheka Meatless amaswidi
Ukwengeza ezinye Ukudla mnandi, ngisho ngesikhathi umsebenzi uvinjelwe ukweqisa Culinary, umngenisi wezihambi abanolwazi uphathe ukubamangaza abantu ababathandayo ngazo zonke izinhlobo zezinto okukhona. Impela, uju okuhle uqobo. Kodwa, okokuqala kunakho konke, kakhulu engakutholi ukudla. Futhi, okwesibili, ngokwanele babo ngeke kube lula. Ngakho-ke, ukuthola ukuthi ungaba eposini uju, musa bayibheka njengelungelo umkhiqizo ezinkulu. Kunalokho, njengoba kwalokho nice itiye noma dessert.
Phakathi kuvunyelwe izibiliboco ngesikhathi Ebolekwe - nensada izithelo nemifino. Ngakho-ke, njengoba dessert kungaba, isibonelo, ukubhaka amagonandoda nge uju namantongomane. Ukuze wenze lokhu, thatha izithelo sasivumela aminyene (2-3 izicucu), izingubo zawo futhi ehlutshiwe. Khona-ke ochotshoziwe nedlanzana nuts (ingakhishwa indawo noma ezinye ishq oat). Pear ukuncishiselwa isigamu, susa phakathi kwabo futhi kancane abafafazwe kalamula. Ngaphakathi ibekwe nati, uju teaspoonful nabanye futhi wathumela kuJehowashi kuhhavini unheated imizuzu 25-30, ewathela phansi pan amanzi kancane.
Yiqiniso, le dessert zingenziwa hhayi kuphela ngesikhathi Ebolekwe, kodwa futhi kunoma iyiphi enye suku. Futhi uju esikhundleni ngokuphelele ushukela ezivamile. Kodwa ngesikhathi lapho iningi okukhona kuyinto Taboo, le dessert kungase kubonakale nje ngokuthi ubuciko. Futhi uju kuzoba esihlwabusayo ikakhulukazi futhi zibe nephunga elimnandi.
Uma ubuyela ngaphambi kokuphetha ngokuthi kungenzeka okuthumela uju, impendulo iza ngokwalo, uma ufunda zokupheka baking bendabuko kwalesi sikhathi lasendulo. ERussia, kwaba ethandwa zonke izinhlobo amakhukhi, amakhekhe Gingerbread. Abaningi babo kwakungabantu abacebile, kodwa kukhona ezinye izindlela ukuthi angasebenzi esetshenziswa ngesikhathi Ebolekwe. Ngokwesibonelo, wabhaka apula pie ngoju.
izinkomishi nesigamu kafulawa ukuthatha inkomishi kwesigamu yemifino uwoyela 3 apula esikhulu. Esinye isidingo 150 amagremu of uju, nesinamoni isipuni kancane amanzi, 0.5 isipuni baking soda.
Apples ehlanzekile ukususa imbewu. 2 Imi zibe tincetu nomzimba omncane, 1 - wagcoba on a grater. Nalokho ingezwe uju, kusale nezinkezo ezimbili, uwoyela, amanzi, baking soda nofulawa. Into esikhundleni ketshezi. apula asikiwe sandile ifomu kokufumbathisa, ufafaze nesinamoni, bafafazwe uju esele, bese besakaza inhlama. Kuthunyelwe kuhhavini a Bhaka ngomzuzu 40 at degrees 200. ERussia, ngamaholidi ngesikhathi Ebolekwe ngempela wabhaka apula ophaya, ukuze ngandlela-thile kukhanye up the okukhulu nekufana.
It kuvela ukuthi impendulo yombuzo ophathelene nokuthi kungenzeka ukuba uju okuthunyelwe, futhi eyakhayo evela umbono endoda ethembekile, futhi ngokuvumelana izazi zokudla, futhi ngesisekelo namaqiniso angokomlando. Ngakho abalibali le injabulo encane.